Dowladda federaalka iyo maamulka Jubba oo xaliyey khilaafkii hakiyey dib-u-heshiisiinta Jubba – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2013 8:54 b 0
Kismaayo, October 21, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Axmed maxamed Islaan (Madoobe) iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya cabdikariin guuleed ayaa shir saacado badan qaatay ugu soo dhamaday Kismaayo, waxaa shirka oo in badan la is mari waayey ka soo baxay qoddobo dhowr ah.
War-murtiyeed soo baxay gelinkii dambe ee maanta ayaa lagu sheegay in maamulka Jubba iyo dowladda federaalka ah ay xaliyeen khilaafkii u dhexeeyey ee mudada aloosnaa, qoddobada lagu muransanaa waxaa ka mid ah ka qayb-galka Axmed madoobe ee shirka arrimaha jubbooyinka ee Muqdisho.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in heshiis buuxa lagu xaliyey qodobkaas iyo kuwo uu ku jiro isla markaasna madaxweyne Madoobe uu ogolaaday in uu tago Muqdisho, sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in ciidamada Col. Barre hiiraale ee duleedka Kismaayo iyagana la soo xereeyo.
?Guddi la isla ogyahay oo la wada dhisayo ayaa ka shaqaynaya habka loo soo xeraynayo ciidamada Col. Bare hiiraale, si xalka jubbooyinka loo dhameeyo.? Ayaa lagu sheegay heshiiska.
Madaxweynaha Jubba ayaa ka tanaasulay go?aan uu horay u sheegay oo tilmaamayey in aysan ogolaan doonin in wada-hadalka lagu daro Col. Bare hiiraale, isla markaasna uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo.
Xubno ka socda ururka midowga Afrika ayaa shirka qayb ka ahaa, waxaana haatan la sii amba qaadayaa horusocodka heshiiskii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Jubba ee 28 Agoosto ka dhacay Adis Ababa.
Madaxweynaha Jubba Axmed madoobe iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ?Cabdikariin guuleed ayaa labbaduba soo dhoweeyey heshiiska dowladda iyo maamulka Jubba, waxaa ay si wadajir ah u tilmaameen in la dhameeyey khilaafkii jiray.